Fahatapahan-jiro any Venezoela: Haharitra hafiriana ? · Global Voices teny Malagasy
24 ora tsy nisy herinaratra ny faritra maro tao Venezoela .
Voadika ny 13 Marsa 2019 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, русский, Shqip, Português, Ελληνικά, عربي, বাংলা, English
Teo amin'ny manodidina ny tamin'ny 4:50 ora hariva tany an-toerana ny 7 Martsa teo, nahatonga ny trano, orinasa, sampandraharaham-panjakana, ary hopitaly maro tsy nisy jiro ny fahatapahan'ny herinaratra goavana tao an-drenivohitra Caracas sy tany amin'ny fanjakana hafa miisa 22 farafahakeliny. Ny vao marainan'ny 8 Martsa, nanomboka nitatitra an-tserasera ireo mpanao gazety sy olon-tsotra tao amin'ny firenena izay afaka nampiasa ny lahatahiry finday fa nandeha miadana ireo milina famokatra herinaratra sy ireo fitaovam-pamokarana herinaratra hafa.
Nilaza ny manampahefanan'ny governemantan'ny filoham-pirenena voarahona Nicolás Maduro fa vokatry ny “sompatra” ny fahatapahana, ary nolazainy izany ho “adin'ny herinaratra” nataon'i Juan Guaidó mpitarika ny mpanohitra, miaraka amin'ny fanohanan'ny governemanta Amerikana. Namaly avy hatrany i Guaidó tamin'ny filazana fa ” avy amin'ny mpisoloky ny fahefan'ny vahoaka Venezoeliana ny sompatra tokana eto,” raha nilaza ny filoha Nicolás Maduro izy, izay nolazain'ny mpitarika ny mpanohitra fa “naka an-keriny” ny fitondrana tamin'ny alalan'ny dingan'ny fifidianana tsy ara-dalàna.
Tsy zava-baovao ao Venezoela ny fahatapahan-jiro- ao anatin'ny krizy ara-toekarena, ara-tsosialy sy ara-politika izay nandrakotra ny firenena tato anatin'ny taona vitsy, niatrika ny fahatapahan-jiro matetika ny olom-pirenena. Fa saingy tena niavaka ny fahatapahana faritra maro sy ny faharetan'ity iray ity .
Vakio ny fitantarana manokana avy amin'ny Global Voices momba ny krizy any Venezoela